ထူးခြား၍ လူတို့တွင်လက်တလောဖြစ်ပျက်သွားသော မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲနေမှု ၇ ခု | Curiosity Science Magazine
ထူးခြား၍ လူတို့တွင်လက်တလောဖြစ်ပျက်သွားသော မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲနေမှု ၇ ခု
August 18, 2016 · by Thar Htet Aung	· in Fundamental Science, Life Science, Science News.	·
မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း(Evolution) ဆိုသော အခြင်းအရာမှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မစိမ်းသော အရာဖြစ်သည်။ မုတ်ဆိတ်မွှေးအရှည်ကြီးနဲ့ လူအိုကြီးတစ်ယောက်၏ ဖြူမဲဓာတ်ပုံအား ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလိုလိုတွေ့မြင်ဖူးသည်။ မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းအား လူထုထံ စတင်သယ်ဆောင်လာသူ ချားလ်စ် ဒါဝင် ဆိုသည့် နာမည်ကို ကြားဖူးကြသည်။ မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သည်နည်း။
လွန်ခဲ့သော နှစ် တစ်သောင်းခန့်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခွေး(dog) ဆိုသော သတ္တဝါများမရှိခဲ့ပါ။ တောရိုင်းမြေခွေး(wolf) များကို တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း မွေးမြူရာမှ လူနှင့် ရင်းနှီးသော ခွေးဆိုသော သတ္တဝါတစ်မျိုး ကို ရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ကို artificial selection – လူသားတို့ပြုလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃ သောင်းခန့်က ဝက်ဝံများသည် အညိုရောင်များသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ချို့မှာ နှင်းများကျဆင်းရာ ဝင်ရိုးစွန်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရင်း ထိုနှင်းများကြားမှာ ၄င်းတို့၏ အရောင်အသွေးသည် တစ်မူထူးနေသည်။ ထို့ကြောင့် အမဲလိုက်ရန် မလွယ်ကူတော့။ အစပိုင်းမှာ သေကြကြေကြသည်။ နောက်နှစ်ပေါင်း များစွာ၊ မျိုးဆက်များစွာကြာသောအခါတွင် နေရာဒေသနှင့်လိုက်သော ဝက်ဝံအဖြူများ ဖြစ်ထွန်းလာသည်။ ဤသည်ကို သဘာဝမှပြုလုပ်ရွေးချယ်ခြင်း(Natural Selection) ဟု ခေါ်သည်။
ဤ နှစ်ပေါင်း ထောင်သောင်းဂဏန်းတွင်ပင် လူသားတို့မှာ မျိုးစိတ်တို့အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်နိုင်ပါက နှစ်သန်းချီသောအချိန်အတွင်းတွင် သဘာဝတရားကြီးသည် မျိုးစိတ်တို့အား မည်မျှကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့မည်ဆိုတာကို မှန်းဆကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဤမျိုးဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတွင်လဲ အချိန်ပြည့်ဖြစ်ထွန်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလဲ အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆိုသည်ထက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျိုးရိုးဗီဇ(genes) များဟု ပြောရင် ပိုမိုတိကျပါလိမ့်မည်။
နောင်နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ခန့်ကြာသောအခါ လူသားတို့သည် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဆိုတာကို ပြောရမှာ ခက်ခဲပါသေးသည်။ သို့သော်…. ဤအချက်များမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာထောင် အနည်းငယ်ခန့်က လူသားတို့ ပြောင်းလဲခဲ့သော အရာများဖြစ်သည်။
၁) အရွယ်ရောက်ပြီးမှ နို့သောက်သုံးခြင်း
နို့သောက်သုံးခြင်းဆိုသည်မှာ နို့တိုက်သတ္တဝါ(mammals) များ၏ အခြေခံထူးခြားသော အချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူသားတို့သည် အရွယ်ရောက်ပြီးမှ နို့သောက်သုံးသော တစ်ခုတည်းသော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ရင်သွေးငယ်ကျော်လွန်ပြီးမှ နို့သောက်သုံးခြင်းမှာ မည်သည့်သတ္တဝါမှ မပြုလုပ်သော အရာဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခုလူသားတို့၏ ၇၅% ခန့်သည် နို့ရည်အား မတည့်သူများဟု ပြောနိုင်သေးသည်။ နို့တွင်ပါဝင်သော lactose အား မတည့်သေးပါ။ ဤ lactose အား ချေဖျက်နိုင်စွမ်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၇၅၀၀ ခန့်မှ စတင်တိုးတတ်လာသည်ဟု တွက်ချက်နိုင်သည်။
၂) ရောဂါဘယ ခံနိုင်စွမ်း
မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုသည်မှာ အသန်မာဆုံးဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင်း မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည် အခြေခံကျသော ရောဂါများအား ခံနိုင်စွမ်းကို ကျွနိုပ်တို့အား ပေးစွမ်းနေသည်။
အများဆုံးလေ့လာထားသော ရောဂါမှာ ငှက်ဖျား ဖြစ်သည်။ ငှက်ဖျားပိုးအား ခံနိုင်စွမ်းမှာ လူသားတို့တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀၀၀ အတွင်း ၅၀% အထက် တိုးတတ်လာသည်ဟု လေ့လာနိုင်သည်။ ငှက်ဖျားတင်မဟုတ်ပါ။ အခြားသော အခြေခံရောဂါများဖြစ်သည့် လက်ပရိုစီ၊ အူအတက်ရောင်ခြင်း၊ အထက်လှန်အောက်လျှော စသည်တို့အားလဲ ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိလာသည်။
အပြာရောင်မျက်လုံးများသည် အလွန်လှသည်။ ၄င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ခန့်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးတည်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်လုံး၊ အသားအရည်၊ ဆံပင် စသည်တို့အား အရောင်သတ်မှတ်ပေးသည့် OCA2 gene သည် ထိုအချိန်က စတင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လူတစ်ယောက်တွင် ပထမဆုံးအနေနှင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ခန့်အတွင်းတွင် ထို gene အဖွဲ့အစည်းမှ melanin အား လျော့နည်းစေခဲ့ကာ မျက်ကြည်လွှာတွင် အညိုရောင်မှ အပြာရောင်သို့ အရောင်ဒီဂရီလျော့ကျစေခဲ့သည်။
၄) အလွန်မြင့်မားသောနေရာတွင် အသက်ရှူနိုင်စွမ်း
လူသားများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ခန့်က ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အလွန်မြင့်မားသော နေရာများတွင် အသက်မရှူနိုင်ခဲ့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုနေရာများတွင် အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုမှာ အလွန်လျော့နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော် တိဘက်လူမျိုးများသည် ပင်လယ်မျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိသော နေရာများသို့ စတင်ရောက်ဖူးခဲ့သည်။ တရုတ် ဟန်မျိုးနွယ်စုမှ လူများသည် Himalayan တောင်တန်းဒေသသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့်တွင် စတင်ခြေဆန့်ခဲ့သည်။
၅) အံဆုံးများ ပျောက်ဆုံးလာခြင်း
လူသားတို့တွင် အံဆုံးများအား ဖယ်ထုတ်ပေးနေခြင်းမှာ သွားဆရာဝန်များတင် မဟုတ်ပါ။ သဘာဝတရားကြီးက ယင်းကိုယ်တိုင် ဖယ်ထုတ်နေပါသည်။
မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း၏ လမ်းကြောင်းရှည်ကြီးကို မျှော်ကြည့်ပါက နှစ် သိန်းသန်းကာလအတွင်းတွင် လူသားတို့၏ ဦးခေါင်းခွံများ၊ မေးရိုးခွံများ သည် သေးငယ်ကျဉ်းမြောင်းလာသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ မလိုအပ်သော အရာများကို သဘာဝတရားကြီးက လျှော့ချပေးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ မီးကို စတင်တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် ပိုမိုနူးညံ့သော အသားများကို စားသုံးလာရသည်မဟုတ်ပါလား။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ပေါင်းအနည်းငယ်ခန့်အတွင်းတွင် အံဆုံးဆိုသော အရာသည်လဲ ပိုမိုနည်းပါးလာသည်။ မေးရိုးခွံများကြီးစဉ်က ၄င်းတို့ကို လိုအပ်ခဲ့သော်လည်း ယခုမူ မလိုအပ်တော့ပါ။ ယခုအခါတွင် ကနေဒါ၊ အလက်ဆကာ ဒေသများတွင် အံဆုံးပေါက်သူဦးရေမှာ ၁၀% အောက်လျော့နည်းလာပြီဖြစ်သည်။ (ကျွန်တော် သာထက်အောင် လဲ အံဆုံးမပေါက်ဖူးခဲ့ပါ 🙂 )
၆) အယ်ကိုဟောကြောင့် မျက်နှာနီသမ်းခြင်းများ လျော့ကျလာခြင်း
ဤအရာကို “Asian Glow” ဟုလဲ သိနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ALDH2 အန်ဇိုင်း နည်းပါးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအန်ဇိုင်းလျော့နည်းခြင်း မှာ esophageal ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ များသည်။ သို့သော် ယခုတွင် နည်းပါးလာပြီးဖြစ်သည်။ အယ်ကိုဟော အား ဦးစွာသောက်သုံးသော အနောက်တိုင်းသားတို့မှာ ယခု ဤ အန်ဇိုင်းအား အတော်အတင့် များပြားနေပြီဖြစ်သည်။
၇) ဦးနှောက်များ သေးလာခြင်း
ဦးနှောက်အရွယ်အစားသေးလာခြင်းဆိုသည်မှာ အသိညဏ်နည်းပါးလာခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ အရွယ်အစားကိုသာပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အသိညဏ် ပိုမိုတိုးပွားလာသည်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာဂဏန်းမှ လူများထက် သင်ကပို၍ အသိညဏ်မြင့်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ခန့်မှ စတင်၍ ဦးနှောက်တို့၏ အရွယ်အစားမှာ သေးလာသည်။ ယခင်က လိမ္မော်သီးအကြီးစား အရွယ်ခန့်ရှိသော လူသားတို့၏ ဦးနှောက်သည် ယခုအခါတွင် တင်းနှစ်ဘောလုံးခန့်သာ ရှိတော့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဤအချက်အား ရှေးလူတို့၏ ဦးခေါင်းခွံများကိုကြည့်ရှု၍ ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
← အက်တမ်များသည် ၄င်းတို့အား စောင့်ကြည့်နေသ၍ မရွေ့လျားကြပါ
အမှောင်ထုအပြည့်နှင့် နှစ်ကာလတစ်ခု →